PC Optimizer Pro 6.4.5.8 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပျူတာမြန်ဆန်စေဖို့ PC Optimizer(Tweak Repair Enhance & Protect) တစ်မျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကွန်ပျူတာကို မြန်ဆန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး Windows crashes တွေကို ၉၀% တားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်.... Registry errors များရှင်းပေးခြင်း၊ junk files များရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ application အမှားတွေကို တားဆီးပေးနိုင်ခြင်း၊ application များကို uninstall လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ၀င်းဒိုးအတက်တွင် မလိုအပ်တဲ့ application များကိုဖြုတ်ထားပေးနိုင်သော Startup Manager ပါဝင်ခြင်း၊ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်များကို backup လုပ်ထားနိုင်ခြင်း System information ကို ကြည့်နိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့်ပါဝင်ပါတယ်... အခြားလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကို အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://www.pcoptimizerpro.com ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Patch ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Sharebeast, Box သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
PC Optimizer System Repair Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
myohtet kyawoo said...